ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ, လူသတ်မှု, လောဘနှင့် Unconscionable မုသာကိုတစ်ဦးကပုံပြင်
1989 ခုနှစ်တွင်ကညီအစ်ကိုတွေရှိထားနှင့် Erik Menendez တစ်ဦးကိုသုံး 12-guage ShotGun သူတို့၏မိဘများ, ဟိုဆေးနှင့် Kitty Menendez သတ်ရန်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ, သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး, parricide, ဖောက်ပြန်နှင့်လူသတ်မှု - ကဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်အပေါငျးတို့သ element တွေရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးသားရေးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ပြီးနောက်သူ့မိဘကျူးဘားကနေအမေရိကန်နိုင်ငံဖို့သူ့ကိုစေလွှတ်သောအခါ Jose Enrique Menendez 15 နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ကက်စထရို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ကျူးဘားအတွက်နှစ်ဦးစလုံးချန်ပီယံအားကစားသမားဖြစ်ဘူးသောသူသည်သူ၏မိဘများကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဟိုဆေးလည်းကောင်းတစ်ဦးအားကစားသမားသို့တီထွင်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးရေကူးပညာသင်ဆုအပေါ်တောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်သည်။
19 နှစ်အရွယ်မှာသူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်မာရိ "Kitty" Anderson တို့နှင့် New York မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့စုံတွဲလက်ထပ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကဖလပ်, New York မှာ Queens College မှတစ်ဦးစာရင်းကိုင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့ကောလိပ်ထဲကသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ သူဟာအလွန်အမင်းအာရုံစိုက်, အပြိုင်အဆိုင်, အောင်မြင်မှု-မောင်းနှင်န်ထမ်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ မိမိအတောင်တက်တက်လှေကားနောက်ဆုံးမှာတစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် RCA နှင့်အတူဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးအမြတ်အနေအထားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းဟိုဆေးနှင့် Kitty မိသားစုသူတို့အဆင်ပြေတိုင်းပြည်-ကလပ်လူနေမှုခံစားဘယ်မှာ Princeton, နယူးဂျာစီပြည်နယ်များတွင်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုယောက်ျားလေးများသည်ယောသပ်ရှိထား, နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်မွေးဇန်နဝါရီလ 10, 1968 မွေးဖွားခဲ့ပြီး, Erik Galen, 1970 ခဲ့ ။
1986 ခုနှစ်တွင်ဟိုဆေး RCA ကိုစွန်သူတိုက်ရိုက် Entertainment ကသမ္မတ, Carolco ရုပ်ပုံများတစ်ဌာနခွဲများ၏အနေအထားလက်ခံခဲ့သည်ဘယ်မှာ Los Angeles ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဟိုဆေးတစ်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးဤသို့ငွေရှာပေးနေသို့အနေနဲ့အသုံးမရသောဌာနခွဲလှည့်သောအကြင်နာမဲ့, ခက်ခဲတဲ့နံပါတ်များကို cruncher, ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
Kitty အဘို့, အနောက်ကမ်းခြေပြောင်းရွှေ့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်များတွင်သူမ၏ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး Los Angeles မှာသူမ၏သစ်ကိုဤလောကသို့ fit မှရုန်းကန်။
မူလကချီကာဂိုကနေ Kitty ကျိုးလူလတ်တန်းစားအိမ်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။
သူမ၏ဖခင်ကသူ့ဇနီးနှင့်ကလေးများမှကိုယ်ထိလက်ရောက်ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူကအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ကျန်ရစ်ပြီးနောက်သူတို့ကကွာရှင်း။ သူမရဲ့မိခင်ဟာပျက်ကွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကျော်ရရှိရန်သလိုပဲဘယ်တော့မှမ။ သူမသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်နက်ရှိုင်းသောမကျေနပ်မှုမှသည်ခံစားခဲ့ရသည်။
အထက်တန်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံး Kitty သုန်မှုန်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ သူမတက်ရောက်သည်တိုင်အောင်မဟုတ်ခဲ့ တောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်က သူမကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သလိုပဲသော။ 1962 ခုနှစ်တွင်သူမလည်းသူမယုံကြည်စိတ်ချမှုအားကောင်းသလိုပဲတဲ့အလှတရားအလှမယ်, အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ကောလိပ်၏သူမ၏စီနီယာနှစ်တွင်, သူမကဟိုဆေးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက်ကျဆင်းခဲ့သည်။ သူမသည်သူထက်သုံးနှစ်ကအဟောင်းကြီးနှင့်ထိုအချိန်ကအပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူမျိုး, ။
ဟိုဆေးနှင့် Kitty လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ, နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုများကဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ Kitty ရဲ့မိဘများကလူမျိုးရေးပြဿနာမပျော်ရွှင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့နှင့်ဟိုဆေးရဲ့မိဘများကသူသာ 19 နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ငယ်ရွယ်လွန်းခဲ့တယ်ထင်ခံစားရတယ်။ သူတို့ကအစ Kitty ရဲ့မိဘတွေကွာရှင်းခဲ့မကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်နှစ်ခု eloped နှင့်မကြာမီနောက်မှနယူးယောက်မြို့မှခေါင်းနှစ်လုံး။
Kitty သူမ၏အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များထံမှလွှဲခြင်းနှင့်ဟိုဆေးကောလိပ်ပြီးဆုံးနေစဉ်ကျောင်းဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့သွား၏။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချွတ်ပြီးနောက်ဒါဟာအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာချွတ်ဆပ်ဖို့သလိုပဲ, ဒါပေမယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာ Kitty သူ့ကိုယ်သူပျောက်ဆုံးသွားနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းအပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူမသည်ယောက်ျားလေးများမှထိန်းသူအိမ်မှာတုန်းကဟိုဆေးအပေါ်စောင့်ဆိုင်းသူမ၏အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ သူမဟိုဆေးတစ်မြှောင်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးခြောက်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းတဲ့အခါ, သူမပျက်စီးခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ကြိမ်မိန်းမနှင့်သူမ၏အပေါ်လိမ်လည်ခြင်းမှဝန်ခံခဲ့သည်။
သူမ၏မိခင်လိုပဲ, Kitty ဟိုဆေးရဲ့ဖောက်ပြန်ကျော်ရရှိရန်သလိုပဲဘယ်တော့မှမ။ သူမသည်လည်းခါးသောစိတ်ဓာတ်နှင့် ပို. ပင်မှီခိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အခုတော့တိုင်းပြည်အနှံ့သို့ပြောင်းရွှေ့တော်မူပြီးမှ, သူမကအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခဲ့ကြောင်းမိတ်ဆွေကွန်ယက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခံစားရတယ်ခဲ့သည်။
ကလေးများရှိခြင်းပြီးနောက် Kitty အလေးချိန်ရရှိခဲ့နှင့်သူမ၏အဝတ်အစားနှင့်အထွေထွေအဆင်းကိုစတိုင်မရှိခဲ့ပေ။ အလှပြင်ဆင်ရေးအတွက်သူမ၏အရသာဆင်းရဲသားကိုကြီးနှင့်သူမတစ်ဦးဆိုးအိမ်အကူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအပေါငျးတို့သကုံထံ Los Angeles မြို့စက်ဝိုင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အတွက်လက်ခံမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပြင်ပတွင်, မိသားစုစုံလင်သောမိသားစုကဲ့သို့အနီးကပ်ခညျြနှောငျမြော်လင့်သော်လည်း, Kitty အပေါ်သေဆုံးသူယူပြည်တွင်းရေးရုန်းကန်မှုများရှိကြ၏။
အဆိုပါစန်းဖာနန်ဒိုချိုင့်ဆင်ခြေဖုံး Calabasas တစ်ခုအထက်-လူလတ်တန်းစားဧရိယာသည်နှင့်ရှိရာ Menendez နယူးဂျာစီမှထွက်ခွာပြီးနောက်သို့ပြောင်းရွှေ့တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ရှိထားသို့လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့ Princeton တက္ကသိုလ် နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လအတွင်းသည်အထိမိသားစုနှင့်အတူမရွှေ့ခဲ့ဘူး။
Princeton မှာရှိထား၏ပထမဆုံးစာသင်စဉ်အတွင်းသူတစ်ဦးတာဝန်ကျတဲ့ plagiarizing ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ပေးခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်ပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲ, Princeton ရဲ့သမ္မတယိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ဤအချက်မှာဟိုဆေးနှင့် Kitty သည့်ယောက်ျားလေးများမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျက်စီးခဲ့နှစ်ခုလုံးကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့လိုချင်ကြောင်းအရှိဆုံးအရာခပ်သိမ်းတယ် - ကြီးမြတ်ကားများ, ဒီဇိုင်နာအဝတ်အစား, မှုတ်များနှင့်လဲလှယ်ဖို့ပိုက်ဆံ, သူတို့လုပ်တာပေါ့အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အဘ၏တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရှိထား Princeton ထဲကပစ်ချခံခဲ့ရကတည်းကဟိုဆေးကသူ့ကိုအချို့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူဖို့အချိန်ကြီးသူတိုက်ရိုက်မှာအလုပျလုပျဖို့သူ့ကိုထားဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရှိထားစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကအလုပ်ကိုသွား, မ UCLA မှသွားနှင့်တင်းနစ်ကစားချင်တယ်။ သို့သော်ဟိုဆေးကြောင့်နှင့်ရှိထားတစ်တိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
, ပျင်းရိစိတ်မထိုတရားအားဖြင့်သူ့ကိုရဖို့ဖေဖေကိုထောက် - သူအများဆုံးသောအရာတို့ကိုဦးတည်ပြုမူအဖြစ်ရှိထားရဲ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာအဆက်မပြတ်နှောင်းပိုင်းကအလုပျအတှကျကြီးနှင့်တာဝန်တွေလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်ရုံတင်းနစ်ကစားသွားကြဖို့ကိုချွတ်ယူလိမ့်မယ်။ ဟိုဆေးထုတ်တွေ့ရှိရသည့်အခါသူကသူ့ကိုပစ်ခတ်ကြသည်။
ယခု Princeton, ရှိထား, 20 နှင့် Erik 17 ပြန်မီသတ်ပစ်ရန်နှစ်လနှင့်အတူ၎င်းတို့၏သူငယ်ချင်း၏မိဘ၏နေအိမ်များ burglarizing စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ဝှမ်း $ 100,000 ပမာဏခိုးယူကြောင်းငွေကြေးနှင့်လက်ဝတ်ရတနာ၏ပမာဏ။
သူတို့ဖမ်းမိခဲ့ကြပြီးနောက်ဟိုဆေးသူ Erik ကဆြုံးယူမယ်လို့ဒီတော့သူကခြယ်လှယ်နေတဲ့ရှေ့နေများ၏အကူအညီဖြင့်, ပြစ်မှုထင်ရှားဒါခဲ့သည်ဆိုပါက Princeton ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ရှိထားရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျော်ပါလိမ့်မယ်ငါသိမြင်၏။ လဲလှယ်တှငျညီအစျအကြံပေးခြင်းအဘို့အသွားရန်နှင့် Erik လုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှိသည်မယ်လို့ အသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှု ။ ဟိုဆေးကိုလည်းသားကောင်များမှ $ 11,000 ထွက်ဖြာ။
Kitty ရဲ့စိတ်ပညာရှင်, က Les Summerfield, Erik အကြံပေးခြင်းအဘို့ကိုတွေ့မြင်ရန်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအဖြစ်စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာဂျရုမ်း Oziel အကြံပြုခဲ့သည်။
အဖြစ်ဝေး Calabasas အသိုင်းအဝိုင်းသို့ သွား. အဖြစ်အလွန်များသောလူများ Menendez မိသားစုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ပိုပြီးဘာမှချင်တယ်။ တုန့်ပြန်မှာမိသားစုကို Beverly Hills မှခေါင်းနှစ်လုံး။
722 မြောက် Elm Drive ကို
သူ၏သားတို့အနေဖြင့် Calabasas ထဲကအရှက်ခံရပြီးနောက်ဟိုဆေး Beverly Hills မှာတစ်အံ့မခန်း $4သန်းအိမ်ကြီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ အိမ်သူအိမ်သားစကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်, ခြောက်လအိပ်ခန်း, တင်းနစ်တရားရုံးများ, ရေကူးကန်နှင့်တည်းခိုခန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခင်နေရာချထားမင်းသား, Elton John, နှင့်ဆော်ဒီမင်းသားပါဝင်သည်။
Erik ကျောင်းများပြောင်းလဲ Beverly Hills မှာအမြင့်နှင့်ရှိထား Princeton မှပြန်လာသောတက်ခဲ့တယ်။ switch သည် Calabasas အထက်တန်းကျောင်းမှာအချို့မိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခဲ့သော Erik များအတွက်ဖြစ်ကောင်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
အငယ်အစ်ကိုဖြစ်ခြင်း, Erik ရှိထား idolize ပုံရသည်။ သူတို့ဟာအခြားသူတွေဖယ်ထုတ်လိုက်နှင့်ကလေးများအဖြစ်, သူတို့ကမကြာခဏအတူတကွသီးသန့်ကစားမယ့်နက်ရှိုင်းသောနှောင်ကြိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ Academic သည်ယောက်ျားလေးများပျှမ်းမျှခဲ့ကြသူတို့မိခင်ကနေတိုက်ရိုက်အကူအညီမပါဘဲထိန်းသိမ်းထားဖို့အတှကျအပင်အဆင့်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ဆရာအကဲဖြတ်မကြာခဏယောက်ျားလေးများ '' အိမ်စာကိုသူတို့အတန်းထဲတွင်ပြသသောစွမ်းရည်အထက်ခဲ့သောအကြံပြုချက်ပါဝင်သည်။
တနည်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုထိုသူတို့အဘို့သူတို့ရဲ့အိမ်စာလုပ်နေခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကညာဘက်ရှိကြ၏။ ကျောင်း Erik တစ်ခုလုံးရဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံး Kitty ကသူ့အိမ်စာပြုပါလိမ့်မယ်။ Erik မှာကောငျးအကွောငျးတစ်ခုတည်းသောအရာတင်းနစ်, အကြောင်းမှာသူလွန်ကဲ။ သူကကျောင်းရဲ့အဖွဲ့အပေါ်နံပါတ်တစ်အဆင့်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းများတွင်မိမိနေ့-to-နေ့ကအသက်တာ၌မရှိတော့ပါဝင်ပတ်သက်ရှိထားနှင့်အတူ, Erik မိမိမိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းကောင်းသောမိတ်ဆွေတင်းနစ်အဖွဲ့ Craig Cignarelli ၏ကပ္ပတိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Craig နှင့် Erik အတူတူအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။
သူတို့ကမိမိအဘ၏အလိုတော်ကိုသိမွငျသှားသူပိုက်ဆံအမွေခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဦးသေဆုံးပြီးတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်တွေအကြောင်း "သူငယ်ချင်းများ" ဟုခေါ်နေတဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကအဘယ်သူမျှမကြံစည်မှုများ၏သက်ရောက်မှုသိတယ်။
ဇူလိုင်လ 1989 by သည် Menendez မိသားစုအတှကျအမှုအရာအောက်ဖက်လိမ်ဆက်လက်။ ရှိထားခဲ့သည် ပညာရေးနှင့်စည်းကမ်းစမ်း ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက် Princeton မှ။ သူလည်းဟိုဆေးပေးဆောင်ကြောင်းပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဆိုင်းငံ့ထောင်ပေါင်းများစွာခံရဖို့သူတို့ရဲ့အသင်းဝင်ကုန်ကျမိသားစုပိုင်သောတိုင်းပြည်ကလပ်မှာဂေါက်ကွင်းတက်ကိုဆုတ်။ ,
ဟိုဆေးနှင့် Kitty သူတို့မရှိတော့သည့်ယောက်ျားလေးများကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ခံစားရတယ်။ တစ်ဦးကသူတို့ကိုကြီးပြင်းခြင်းနှင့်သူတို့၏ဘဝအတှကျအခြို့သောတာဝန်ရင်ဆိုင်ရဖို့ကြိုးစားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဟိုဆေးနှင့် Kitty တစ် dangling မုန္လာဥနီကဲ့သို့မိမိတို့အလိုတော်သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုဆေးသူတို့နထေိုငျခဲ့သညျလမျးကိုမပြောင်းခဲ့ပါလျှင်အလိုတော်ထံမှသူ၏သားတို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ပြင်ပမှာပွဲပေါ်အခြေခံပြီး, နွေရာသီ၏ကျန်ရှိသောမိသားစုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သွားကြဖို့သလိုပဲ။ သူတို့ကတစ်မိသားစုအဖြစ်နောက်တဖန်အမှုအရာအတူတူလုပ်နေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် Kitty, အမည်မသိအကြောင်းပြချက်အဘို့, ယောက်ျားလေးများန်းကျင်ဘေးကင်းလုံခြုံမခံစားရဘူး။ သူမသည်သူမ၏သားတို့၏ကြောက်မက်ဘွယ်သော feeling အကြောင်းကိုသူမ၏ကုထုံးမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သူမသည်သူတို့ narcissistic sociopaths ခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။ ညဥ့်အခါသူမအနီးအနားမှာသူမ၏တံခါးများသော့ခတ်နှစ်ယောက်ရိုင်ဖယ်ထားရှိမည်။
သြဂုတ်လ 20, 1989 တွင်, ပတ်ပတ်လည်သန်းခေါင်အချိန်, Beverly Hills မှာရဲတပ်ဖွဲ့ရှိထား Menendez ကနေ 9-1-1 ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Erik နှင့်ရှိထားရုံရုပ်ရှင်သွားပြီးနောက်အိမ်ပြန်နှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏မိသားစုအခန်းတစ်ခန်းမှာသူတို့ရဲ့မိဘများအသေကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများ 12-guage သေနတ်များနှင့်အတူပစ်ခတ်ခဲ့သညျ။ သူသခှေဲစိတျခွငျးအစီရင်ခံစာများအဆိုအရဟိုဆေး "ဟုအဆိုပါဦးနှောက်၏ evisceration နှင့်အတူပေါက်ကွဲယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်" ခံစားခဲ့ရနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်သူ၏နှင့် Kitty ရဲ့မျက်နှာများဆိတ်ကွယ်ရာလွခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Menendez သတ်သော ပတ်သက်. ကောလဟာလသတင်းများအရသီအိုရီ Erik နှင့်ရှိထားမှသတင်းအချက်အလက်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအခြေခံပြီးတစ်လူဆိုးဂိုဏ်း hit အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကလူအုပ်စုထိခိုက်ခဲ့လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, က overkill တစ်ဦးနှင့်အမှုနှင့်ရဲကဝယ်ယူမခံခဲ့ရပါ။ ဒါ့အပြင်အဘယ်သူမျှမ ShotGun Case လူသတ်မှု site ကိုမှာရှိကြ၏။ Mobsters shell ကို Case clean up လုပ်ဖို့နှောင့်ရှက်ကြဘူး။
အဘယ်အရာကိုစုံထောက်အကြားတွင်ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ဖန်တီး Menendez ကညီအစ်ကိုတွေကသူတို့မိဘများအသတ်ခံရပြီးနောက်ချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည့်အသုံးစရိတ်ခဲ့ကြသည်ပိုက်ဆံများ၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုလည်းရှည်လျားခဲ့သည်။ စျေးကြီးတဲ့ကားတွေ, Rolex နာရီ, စားသောက်ဆိုင်များ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတင်းနစ်နည်းပြ - ထိုယောက်ျားလေးတစ်ဦးအသုံးစရိတ်လိပ်ပေါ်ရှိကြ၏။ အစိုးရရှေ့နေတွေကညီအစ်ကိုတွေခြောက်လအတွင်းဒေါ်လာသန်းဝန်းကျင်သုံးစွဲကြောင်းခန့်မှန်းပါတယ်။
မတ်လ 5, 1990 တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့ခုနစ်လ, Judalon စမိုက်သဟာ Beverly Hills မှာရဲအဆက်သွယ်နှင့်ဒေါက်တာဂျရုမ်း Oziel သူတို့ရဲ့မိဘများ၏လူသတ်မှုမှဘျောရှိထားနှင့် Erik Menendez ၏အသံတိပ်ခွေရှိခဲ့သောသူတို့ကိုအကြောင်းကြား။ သူမလည်းသူတို့ကိုသေနတ်များဝယ်ယူရာနှင့် Menendez ညီအစ်ကိုတွေကိုသူရဲမှသှားလြှငျ Oziel သတ်ပစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကွောငျးသတငျးအခကျြပေးခဲ့သညျ။
သူကသူမသူ Menendez ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ရှိခြင်းခံခဲ့ရအစည်းအဝေးတစ်ခုနားထောင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ရုံးမှာစိတ်ရှည်ဖို့ဟန်ဆောင်ရန်သူမ၏ဟုမေးလာသောအခါထိုအချိန်ကစမိုက်သ်, Oziel နဲ့စွဲချက်တင်ကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မှု၌ Oziel သည့်ယောက်ျားလေးများကိုကြောက်ခဲ့တာနှင့်ရဲခေါ်ခြင်းရှိစမိုက်သချင်ခဲ့တယ်။
ခြိမ်းခြောက်မှု Oziel ရဲ့ဘဝအပေါ်ရှိခဲ့သည်သောကြောင့်, လူနာ-ကုထုံးလျှို့ဝှက်ချက်များအုပ်ချုပ်မှုကိုလျှောက်ထားခဲ့ပါဘူး။ တစ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူလက်နက်ကိုင်ရဲလုံခြုံရေးသိုက် box ထဲမှာတိပ်ခွေတည်ရှိသောနှင့်စမိုက်သပေးသတင်းအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်လုံ
မတ်လ 8 ရက်နေ့တွင်ရှိထား Menendez ဣသရေလအမျိုး၌တင်းနစ်ပွဲစဉ်မှပြန်လာသောနှင့်ရဲသို့သူ့ကိုယ်သူလှည့်တဲ့သူ Erik များ၏ဖမ်းဆီးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, မိသားစုနေအိမ်အနီးတွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ညီအစျကိုအာမခံခြင်းမရှိဘဲရမန်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေတွေငှါး၏။ Leslie Abramson Erik ၏ရှေ့နေနှင့် Gerald Chaleff ရှိထားရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Menendez ကညီအစ်ကိုတွေကသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများအနက်အများဆုံးသောလူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနှင့်မိမိတို့၏ arraignment စဉ်အတွင်းလေထုအရပျကိုယူပြီးဘာများအတွက်သင့်လျော်သောလေးနက်မှုမရှိပေ။ အဆိုပါညီအစ်ကို, ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွတူသောအတွက် strutted ပြုံးပြီးနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှချီလွှဲများနှင့်တရားသူကြီးကိုဟောပြောစပြုလာသောအခါ snickered ။ ရသည်မှာသူတို့သူမ၏အသံသည်၏လေးနက်သောလေသံရယ်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ချောင်းမြောင်းနေချိန်မှာသင်, ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင်မူကား, သင်ရရှိနိုင်သည့်အဘို့အတပ်ပြီးသေနတ်, နှင့်တကွ, ဘဏ္ဍာရေးအမြတ်အဘို့အမျိုးစုံလူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ကြ သေဒဏ် ။ သင်ဘယ်လိုတရားတွေ့တော်မူပါသနည်း"
၎င်းတို့၏အမှုများကိုရုံးတင်စစ်ဆေးသို့သှားကွ၏ရှေ့တော်၌သုံးနှစ်ကြာယူလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတိပ်ခွေများ၏ခွင့်ကြီးတွေကိုင်တက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတရားရုံးချုပ်နောက်ဆုံးတော့အချို့ကိုသော်လည်းမရှိသမျှကိုတိပ်ခွေများလက်ခံနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုအဘို့, လူသတ်မှုဖော်ပြ Erik ၏တိပ်ခွေခွင့်မပြုခဲ့သညျ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဟာဗန် Nuys Superior တရားရုံးထဲမှာဇူလိုင်လ 20, 1993 ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီးစတန်လေအမ် Weisberg ဦးခံခဲ့ရသည်။ သူကညီအစ်ကိုတွေအတူတူစုံစမ်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသီးခြားကန့်ကွက်ကြလိမ့်မယ်လို့။
Pamela Bozanich, အကြီးအစိုးရရှေ့နေက, Menendez ညီအစ်ကိုတွေကိုအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့နှင့်သေဒဏ်မရချင်တယ်။
Leslie Abramson Erik နှင့်ကို Jill လန်စင်းကိုယ်စားပြုခဲ့ပါတယ်ရှိထား၏ရှေ့နေဖြစ်ခဲ့သည်။ Abramson ဖြစ်သကဲ့သို့ရှေ့နေအဖြစ် flamboyant, လန်စင်းနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်အညီအမျှတိတ်ဆိတ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သိသိသာသာအာရုံစူးစိုက်။
နှစ်ဦးစလုံးကာကွယ်ရေးရှေ့နေများကသူတို့ရဲ့ clients များဟာသူတို့ရဲ့မိဘများကိုသတ်ခဲ့ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူတို့ဟာထို့နောက်ဟိုဆေးနှင့် Kitty Menendez ၏ဂုဏ်သတင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေ Method အကြောင်းကိုသွားလေ၏။
သူတို့ဟာ Menendez ညီအစ်ကိုတွေကိုလိင်မိမိတို့၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖခင်တို့ကအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ကောက်သောအလွဲသုံးစားမှုသူမ၏ကိုယ်ပိုင် form မှာပါဝင်မရသည့်အခါမိမိတို့အမိခင်, ဟိုဆေးသည့်ယောက်ျားလေးများဖို့လုပ်နေတာဘာပျေါတှငျသူမ၏နောက်ကျောကိုလွှဲရှောင်ခဲ့သကျသပွေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ကညီအစျကိုမိဘများကသူတို့ကိုသတ်သွားကြသည်ကိုကွောကျရှံ့ထဲကကသူတို့မိဘများအသတ်ခံရကပြောသည်။
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုကြောင့်လောဘထဲကပြုမိခဲ့ကွောငျးဖျောပွလူသတ်မှုနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများရိုးရှင်းသော။ အဆိုပါ Menendez ကညီအစ်ကိုတွေသူတို့မိဘ၏အလိုတော်ထဲကဖြတ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအပေါ်ထုတ်မဆုံးရှုံးရမယ့်ခဲ့ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ အဆိုပါလူသတ်မှုတစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ထဲကပြုမိယခုအချိန်တွင်တိုက်ခိုက်မှု၏စွယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲထွက်ထင်နှင့်ဆိုးဝါးညဥ့်မတိုင်မီရက်ပေါင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်စီစဉ်ထားခဲ့ကွောငျးတစျခုမဟုတျပေ။
အဆိုပါ Los Angeles မြို့ Das ရုံးကိုသူတို့ချက်ချင်းဒုတိယရုံးတင်စစ်ဆေးလိုကြောင်းပြောသည်။ သူတို့ကစွန့်လွှတ်သွားမခံခဲ့ရပါ။
ဒုတိယစမ်းသပ်မှုပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်သကဲ့သို့ flamboyant မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အခြားဖြစ်ရပ်များမှအပေါ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြခြင်းမရှိရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာများနှင့်အများပြည်သူရှိခဲ့သည်။
ဤအချိန်ညျဒါဝိဒျ Conn အကြီးအစိုးရရှေ့နေကြီးနှင့်ချားလ်စ် Gessler ရှိထားကိုယ်စားပြုသည်။ Abramson Erik ကိုယ်စားပြုဆက်ပြောသည်။
ကာကွယ်ရေးပြီးသားဆိုပါတယ်ခဲ့ပြောခဲ့တပြင်လုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, သှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျးလမျးညှနျခစကားကိုနားထောငျဖို့နှောင့်ယှက်ခံခဲ့ရပေမယ့်, ကနားကြား၏ထိတ်လန့်အုပ်ရ၏။ အရာ၏တာ
သို့သော်တရားစွဲဆိုမှုဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသူကပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံကိုထက်ခေတ်သုံးလူတစ်ဦး၏ရောဂါနှင့်အလျောက်ငါတို့၌။ Bozanich ဟာဂျူရီကြောင့်မကျမယ်လို့ယုံကြည်မှာအားလုံးကဖြေရှင်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ Conn ဖြောင့်ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်ညီအစ်ကိုတို့ခေတ်သုံးလူတစ်ဦး၏ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောနေထံမှကာကွယ်ရေးပိတ်ဆို့ဖို့တရားသူကြီး Weisberg တယ်။
ဒါဟာအချိန်ဂျူရီနှစ်ခုရေတွက်၏အပြစ်ရှိကြောင်းအဆိုပါ Menendez ညီအစ်ကိုတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုတွေ့ ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု နှင့်လူသတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု။
အဆိုပါ Menendez စုံစမ်းရာပင်နယ်တီအဆင့်စဉ်အတွင်း, သူ့အားဖမ်းဆီးစဉ်ကတည်းက Erik ရဲ့စိတ်ရောဂါသူဒေါက်တာဝီလျံ Vicary, က Erik အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Leslie Abramson ပြန်လည်သုံးသပ်ခံရသူ၏မှတ်စု၏ဝေမျှပြန်ရေးမှသူ့ကိုမေးမလျှောက်သောဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကသူမသတင်းအချက်အလက်ကိုခေါ်ဆိုပါတယ် "prejudicial နှင့်ဘောငျထဲက။ "
ဖယ်ရှားခဲ့ကွောငျးတစျခုမှာပုဒ်မမိမိအဘ၏လိင်တူဆက်ဆံသူချစ်မြတ်နိုးတဲ့၎င်းတို့၏မိဘများကသူတို့ကိုသတ်ပစ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည် Erik နှင့်ရှိထားကိုပြောသည်ဟု Erik ရဲ့ပိုင်ထိုက်။ Erik တပြင်လုံးကိုအရာမုသာခဲ့ကြောင်း Vicary ကပြောကြားခဲ့သည်။
Abramson incriminating မှတ်ချက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုသူမ၏သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကုန်ကျနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်း mistrial စေပြီနိုင်ဘူး။ အဆိုပါတရားသူကြီးကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖို့ခွင့်ပြုမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်စီရင်ချက်ချအဆင့်ဆက်ပြောသည်။
ဇူလိုင်လ 2, 1996 တွင်, တရားသူကြီး Weisberg ရိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲထောင်ထဲမှာဘဝမှရှိထားနှင့် Erik Menendez ထောင်ဒဏ်။
ညီအစ်ကိုတွေကနောက်ပိုင်းမှာသီးခြားအကျဉ်းထောင်သို့ပို့ခဲ့သည်။ ရှိထားမြောက်အမေရိက Kerns ပြည်နယ်မှစလှေတျတျောခဲ့သည်အကျဉ်းထောင်များနှင့် Erik ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်သို့ပို့ခဲ့သည်။
Stanley Tookie ဝီလျံ၏ပြစ်မှု
အပြင်းထန်ဆုံး Element ကိုဆိုတာဘာလဲ
ယောဟနျသပက်ထရစ် Shanley ရဲ့ '' သံသယ ''
Salir - မြေဆီလွှာအား
မိုက်မဲ Pat Robertson က Quotes
အဆိုပါ 11 အကောင်းဆုံးအယ် Romance
Compton ဟာ Rapper အဆိုပါဂိမ်း၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
MILF ကအတိုကောက်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအထဲက Find
Celebrity ဘဝအကွောငျးကို5ဒဏ္ဍာရီနာမည်ကြီးတွေဆီကနေဖြစ်ခြင်းအကြောင်း 15 Quotes
တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး v ။ တိရိစ္ဆာန်လူမှုဖူလုံရေး
မာသ Raye ဗီယက်နမ်တစ်ဦးသူနာပြုခဲ့သလား
သည် Norma McCorvey
လူ့ Mystery နှင့် Anomaly ၏ပြခန်း
အဆိုပါမာစတာမှာချန်ပီယံလိဂ်ညစာစားပွဲ: အ Menu ကိုတွင်ကဘာလဲ?